Madagasikara: Ary rehefa eo am-pelatanan’ny tafika ny fitondrana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 2:20 GMT
Nanaitra an'i Madagasikara ny vaovao momba ny fikomiana tao amin'ny toby miaramila iray teto Antananarivo ny 10 Martsa 2009. Niparitaka tany amin'ny toby miaramila hafa ny fikomiana nanomboka tamin'izay ary nametra-pialana ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Vice-Amiral Mamy Ranaivoniarivo.
Voatendry hanolo io toerana io i Mamy Ranaivoniarivo herinandro vitsivitsy monja taorian'ny fametraham-pialan'i Cécile Manorohanta taorian'ny rà mandriaka ny 7 Febroary 2009, rehefa nikasa ny hiditra ny lapam-panjakana ny mpanao fihetsiketseha avy amin'ny mpanohitra Andry Rajoelina “TGV” ary voalaza fa nitifitra azy ireo ny mpiambina ny filoham-pirenena.
Araka ny loharanom-baovao, noterena hametra-pialana ny Vice-Amiral Mamy Ranaivoniarivo, raha notanan'ny miaramila mpikomy izay nanery azy hanoratra taratasy ary hamaky izany nandritra ny valan-dresaka an-gazety izy. Nitatitra izany ny BBC :
Namaky taratasy fametraham-pialana fohy teo anoloan'ireo mpanao gazety izy, saingy nilaza izy avy eo fa noterena hametram-pialana.
“Angamba niala aho noho ny fandrahonana. Tsy tiako hifamono ny samy Malagasy, “hoy izy.
Naneho hevitra momba ity fametraham-pialana ity ilay bilaogera Jentilisa:
Taorian'ny fialany, namoaka fe-potoana farany ny lehiben'ny tafika :
“Miangavy ny mpisehatra ara-politika rehetra izahay, ny fiarahamonim-pirenena ary ny antoko hafa mba hiara-hivory avy hatrany hahitana vahaolana ao anatin'ny 72 ora mba hamoahana ny firenena amin'ny krizy amin'izao fotoana izao,” hoy ny Jeneraly Rasolomahandry.
Ny 11 Martsa 2009, nofehezin'ny lehiben'ny mpikomy, ny kolonely Ndriarijaona ny tafika :
“Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny Kolonely André Ndrianarijaona ny alarobia fa nanaiky hamindra ny fahefany taminy ny lehiben'ny tafika .
Nilaza i André Ndrianarijaona fa nanaiky ny Jeneraly Edmond Rasolomahandry taorian'ny adiny iray latsaka niadiana hevitra tao amin'ny biraon'ny minisitera. Lasa tsy niteny i Edmond Rasolomahandry .
Tsy nisy ny fanambarana avy amin'ny Filoha Marc Ravalomanana, izay nanendry an'i Rasolomahandry tamin'ny volana lasa, taorian'izany.
Nitarika ny vondrona miaramila i André Ndrianarijaona izay nanambara nandritra ny faran'ny herinandro fa tsy handray baiko avy amin'ny Filoha intsony izy ireo. Ny Alarobia, nilaza i Ndrianarijaona fa miaraka aminy ny tafika . “
Tsikaritra fa nobahanan'ny miaramila ny arabe, ary nisy vavolombelona nitatitra momba ny tsaho tao amin'ny Twitter fa haka ny ministera ireo mpanohana an'i Andry-TGV. Ny tena nampalahelo, miady eny an-dalambe samy malagasy, ary voalaza fa olona niisa dimy ambin'ny folo no naratra. Namoaka ity sary manaraka ity tao amin'ny bilaoginy i Pakysse .
Tena niahiahy momba ny mety ho tohin'ny tantara ireo bilaogera Malagasy .
Sahiran-tsaina noho ny mety hisian'ny ady an-trano i Tahina , izay angamba efa nanomboka:
“Raha eto am-panoratana aho dia mitohy ny fandrobana, anisan'ireo toerana voaroba ny SFOI Tanjombato.
Niaraka tamin'ireo namana, niresaka tamin'ny vahiny iray izay nipetraka teto Madagasikara nandritra ny valo taona izahay ary nanonona ny teny hoe “ady an-trano” izy. Nilaza izy fa milamina loatra ny Malagasy ary sarotra ny maka sary an-tsaina ny zava-nitranga. Inoako fa marina ny azy. “
Namoaka ny sarin'ny zava-nitranga i Rado .
Ao amin'ny Malagasy Miray, manohitra tanteraka ny zavatra ataon'ny vahoaka Malagasy amin'ny fireneny ny mpanoratra iray :
Niezaka ny haka vahana manoloana ny krizy i Jentilisa ary nanontany tena raha toa ka tsy lehibe noho ny adin-dRavalomanana sy Rajoelina ho eo amin'ny fitondrana ny olana. Inona no avelantsika eto? Nahoana no mikomy ny miaramila? Miresaka momba ny Tantara izy ary mahita ny fitovizana tamin'ny fikomian'ny tafika nandritra ny ady teo amin'i Madagasikara sy Frantsa tamin'ny taona 1885 (amin'ny teny Malagasy). Ady iray izay nifarana tamin'ny faharesen'ny Malagasy, ny fanovàna an'i Madagasikara ho eo ambany fitondran'ny Frantsay, ary avy eo ny fanjanahantany.
Nampatsiahy ny tantara momba ny anjara asan'ny tafika ihany koa i Tomavana :
“Rehefa mandalo ny andro dia mitombo hatrany ny lisitr'ireo niharan'ny korontana eto Madagasikara. Tao Genève ihany koa, nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana ny tafika. Ny fahasamihafana dia hoe ny Genevans dia nianatra ny lesona momba ny tantara: ny tafika Soisa dia tsy nampiofana hitazona ny filaminam-bahoaka, ny tafika dia natao hiaro ny firenena mandritra ny ady.
Nandritra izany fotoana izany, nambaran'ny iraky ny Firenena Mikambana fa eo ambany fiarovan'ny Firenena Mikambana ny mpitarika ny mpanohitra Andry TGV, kanefa nandà izany ny foiben'ny Firenena Mikambana taorian'izay ary nanamafy fa eo ambany fiarovan'i Frantsa i Andry TGV ary nanambara ny manampahefana tao amin'ny Masoivohon'i Frantsa fa eo am-pelatanan'ny Fiangonana Katolika i Andry TGV ankehitriny, kanefa araka ny loharanom-baovao hafa, dia tany amin'ny toerana tsy fantatra izy mba hiarovana ny tenany. Toa niverina soa aman-tsara, tao an-tranony tany Ambatobe anefa izy ary narovan'ny mpikomy ary nandà ny handray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra nasionaly izay napetraky ny Firenena Mikambana sy ny hery tandrefana mba hiarovana azy!
Namoy ny tranony izay main'ny afo sy norobain'ireo mpanohana an'i Andry-TGV ny ben'ny tanàna vaovaon'Antananarivo, izay notendren'ny filoha. Ary nosakan'ny tafika tsy hiditra ny fiaramanidin'ny filoham-pirenena i Marc Ravalomanana, izay voalaza fa handositra ny firenena. Nisy mpanohana an'i Marc Ravalomanana nanao hetsi-panoherana teo ivelan'ny Masoivohon'i Frantsa manohitra ny fitsabahany amin'ny raharahan'ny Malagasy.
Nanontany tena i Solofo raha midika ho fanohanana ny fanonganam-panjakana avy amin'ny Firenena Mikambana sy i Frantsa ny fiarovana nomen'izy ireo an'i Andry :
Niditra an-tsokosoko tao amin'ny toeram-ponenan'ny Masoivoho Frantsay i Andry ary teo ambany fiarovan'ny Firenena Mikambana izany; tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny fitantanana ireo krizy ara-politika isan-karazany maneran-tany, indrindra fa ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa tahaka ny OUa dia nanohana foana ny fanajana ny andrim-panjakana ho fitsipika fototra.
Fanohanana ofisialy ho fanohanana ny fanenjehana sy ny fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao ve eto Madagasikara? … Ity fiarovana ity dia tsy fanohanana ofisialy ny fanonganam-panjakana fa fomba iray hanosehana ny rehetra hanaiky ny hanoritra ny “fiaraha-mitantana” any amin'ny ambaratonga rehetra (ao amin'ny governemanta, ao amin'ny Antenimieran-doholona ary eo amin'ny sehatra fanaraha-maso adhoc izay ho entina hanohanana ny fangatahan'ny mpanohitra), ary izany rehetra izany amin'ny fanajana ny lalàm-panorenana sy ny fe-potoana voalazan'ny fifidianana. “
Nalahelo ihany koa i Solofo fa Ravalomanana, izay niala tsiny ampahibemaso noho ny fahadisoana nataony nandritra ny fito taona nitondrany, dia niandry fotoana ela loatra vao niaiky ny hadisoany:
“Ity vahaolana ity dia sady mbola sisa ihany no fomba tsara sy mahasoa ho an'ny firenena, indrindra fa raha toa ka toa nanapa-kevitra ny hanao ny fanakianany ny tenany amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny Ravalomanana. Mazava ho azy fa tsy maintsy ho hita eo amin'ny asa izany mandritra ny andro sy volana ho avy, saingy hitako fa mampalahelo fa ela loatra vao miova. “
Tezitra mafy i Jentilisa raha nahare fa nahita fialofana tao amin'ny Masoivoho Frantsay i Andry-TGV :
Valo volana lasa talohan'izay no nandroahan'i Marc Ravalomanana an'i Gildas Le Lidec, ambasadera Frantsay teto Madagasikara. Nihevitra izy fa “mitondra vitan-dratsy” ity diplaomaty ity noho ny fironana isian'ny fanonganam-panjakana sy famonoana olona amin'izay firenena Afrikana andalonany….